FAQ - Smart Weigh Packaging Machines Co., Ltd.
Ny vidinay dia miankina amin'ny tetikasananao miaraka amin'ny fepetra takiana. Haniraka anao ny lisitry ny vidin'ny fanavaozana aorian'ny fifandraisan'ny orinasanao aminay izahay raha mila fanazavana fanampiny.
Tsia, ny MOQ anay dia milina 1 napetraka. Mazava ho azy, ny ampahany fanampiny MOQ dia tsy pc 1.
Eny, afaka manome taratasy fanamarinana CE izahay, taratasy fanamarinana vy tsy voatanisa 304, fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa sy ny hafa.
Amin'ny ankapobeny, ny famokarana tsipika famonosana tanteraka dia 45 andro. Milina tokana dia 20 andro. Raha manana baiko maika ianao, dia afaka mifandray aminay, angamba ny masinina mitaky anao dia ao amin'ny stock anay.
Azonao atao ny mandoa ny fandoavam-bola amin'ny kaonty banky anay, TT na LC.
15 volana taorian'ny fandefasana. Izahay dia manome antoka ny faritra elektronika sy ny asa ataontsika. Ny fanoloran-tena ho anay dia ny fahafaham-po amin'ny vokatra. Amin'ny garantiana na tsia, dia ny kolontsainan'ny orinasa iarahantsika sy mamaha ny olana rehetra ataon'ny mpanjifa amin'ny fahafaham-pon'ny tsirairay
Ny vidin'ny fandefasana dia miankina amin'ny fomba safidinao hahazoana ny entana. Ny lalan-drivotra no haingana indrindra nefa koa ny fomba lafo indrindra. Ny seaway no vahaolana tsara indrindra amin'ny vola be. Ny saran'ny entana mivezivezy azontsika omena anao fotsiny raha fantatsika ny antsipirian'ny habetsahan'ny lanjany, ny lanjany ary ny fomba. Azafady mba mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.